Google ကစက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်အတွက်ဖြစ်ရပ်များကိုအတည်ပြုပေးသည် Androidsis
Nexus စမတ်ဖုန်းအသစ်များ၏အနာဂတ်ဖြန့်ချိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟလများပျံ့နှံ့နေသည်။ LG နဲ့ Huawei တို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းတော်တော်များများပြောကြတယ်။ ၎င်းသည်လူသိများသော Nexus တံဆိပ်အောက်တွင်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုကိုပြသမည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကောလဟာလများစွာနှင့်ဤကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါက်ကြားမှုအမျိုးမျိုးပြီးနောက် terminal နှစ်ခုလုံး၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲနှင့် Android version သစ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပြက္ခဒိန်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်သားပါ လာမည့်စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ၎င်းကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ရန် Google ကရွေးချယ်သောနေ့ရက်ဖြစ်လိမ့်မည် အသစ် Nexus devices များ နှင့်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow.
Google သည်စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နံနက် ၉ နာရီနှင့်စနေနေ့ညနေ ၆း၀၀ နာရီတွင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ကျင်းပမည့်နောက်ဖြစ်ရပ်အတွက်စာနယ်ဇင်းဖိတ်ကြားမှုများကိုပေးပို့သည်။ ဒီပွဲမှာ Mountain View မှယောက်ျားလေးများသည် LG ၏ Nexus 299နှင့် Huawei ၏ Nexus စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Nexus 5X နှင့် Nexus 6P
ဤသည်မှာအနာဂတ်ဂူဂဲလ်ဆိပ်ကမ်းအမည်များကိုခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်းနှင့် Droid-Life နည်းပညာ portal တစ်ခုအနေနှင့်လေ့လာသိရှိခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းထုတ်ကုန်များ၏စီးပွားဖြစ်နာမည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Nexus 5X ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG နှင့်ထုတ်လုပ်သောစက်ပစ္စည်းအတွက် ကို Nexus Huawei မှထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းအတွက် 6P ။
အခမ်းအနားသို့သွားရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည့်တက်ရောက်သူများသည်တစ်နာရီမတိုင်မီဖြစ်ရမည်။ တံခါးများသည်တစ်နာရီမတိုင်မီဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်ရာသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလိုက်နာရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာရှိနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏နှစ်ခုဆိပ်ကမ်းတင်ပြ။ The ဖြစ်ရပ်ကို Google ၏တရားဝင် YouTube channel တွင်ထုတ်လွှင့်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကိုငါမတက်ချင်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ ၀ င်နိုင်အောင် streaming ကနေလိုက်နိုင်မှာပါ။
Nexus ထုတ်ကုန်နှစ်ခုအပြင်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုတွေ့နိုင်ပြီး ၈ လက်မစမတ်ဖုန်းသစ်တစ်ခုကဲ့သို့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအောက်တွင်ကျရောက်နိုင်သည်။ filtration တစ်အခြေခံစံနှုန်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး အသစ် chromecast နောက်ဆုံးပေါ် Android version ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallowနှစ်ခု Nexus devices များနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင် Nexus အသစ်ကိုသေချာစွာမြင်တွေ့ရန်တရားဝင်ရက်စွဲရှိပြီးသားဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၅ ၏မျှော်လင့်ထားသည့်ပစ္စည်း ၂ ခုကိုတင်ပြမည့် နေ့မှစ၍ ခန့်အပ်ထားသောနေ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ Nexus 2015 အသစ်ကိုကြည့်ချင်တယ် ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google ကစက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်ဖြစ်ရပ်ကိုအတည်ပြုသည်